OMDA : Voafidy ho filohan’ny filan-kevi-pitantanana Razafiarison Françis
Voafidy ho filohan’ny filan-kevi-pitantanan’ny Ofisy Malagasy momba ny zon’ny mpamorona (OMDA) i Françis Razafiarison na Françis Turbo, izay sady Tale jeneralin’ny kolontsaina eo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina. 5 décembre 2019
Hiantoka ity andraikitra ity mandritra ny telo taona indray izy, araka izany, satria telo taona no faharetan’ny fe-potoana iasan’ny filohan’ny Filan-kevi-pitantanana.
Marihina fa tamin’ny alalan’ny fifidianana no nahazoany ity andraikitra vaovao sahaniny ity. Lany teo amin’ny fihodinana faharoa ny tenany rehefa nifaninana tamin’i Jaojaoby sy Samoela.
Nahazo isam-bato mitovy izy sy Samoela nandritra ny fihodinana voalohany. Vato 5 no azony ary vato 5 ihany koa no azon’i Samoela. Noho izany indrindra dia tsy maintsy niditra tamin’ny fihodinana faharoa indray ny mpifidy. Nahazo isa 7 ity mpanao hatsikana fanta-daza teo amin’ny fihodinana faharoa ary isa 6 kosa no azon’i Samoela.